Tora-pasika mahafinaritra 5 any Sipra hankafizanao ny fahavaratra 2016 | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika mahafinaritra 5 any Sipra hankafizanao ny fahavaratra 2016
Mariela Carril | | Sipra, tora-pasika
Eritreritrao ve Holiday 2016? Ahoana ny Sipra, nosy ny masoandro? Ity nosy Mediteraneana ity dia mahasarika mpizahatany isan-taona ary manana, lalana amoron-dranomasina tsara tarehy izay avy any Sainan'ny manga Anisan'ny harena sarobidy indrindra ao aminy.
Ny fahavaratra dia tsy afaka manadino ny moron-dranomasina, ny ranomasina, ny masoandro ary ny endrika mahafinaritra mba hahafinaritra ny maso, miala sasatra, mihinana sy misotro. Ary tsy misy hafa. Eto amin'ity tontolon'ny kapitalisma lozabe ity izay andaniantsika ny fotoana iasantsika dia mendrika izany fiadanana izany isika. Noho izany, raha afaka mandeha amin'ny lalanao io nosy Mediteraneana io amin'ny fahavaratra, dia avelako ianao morontsiraka tsara tarehy dimy any Sipra.
1 Coral Bay Beach
2 Konnos Beach
3 Gliki Nero Beach
4 Santa Barbara Beach
5 Pissorouri Beach
Mirehareha ity amoron-dranomasina ity amin'ny sokajy Sainan'ny manga. Any amin'ny faritra Paphos no misy azy, any Pegeia, toeram-pialan-tsasatra fanta-daza amin'ny nosy. eFA dimanjato metatra ny lavany ary tena malaza be izy io satria tsara tarehy be.
Ny morontsiraka dia fasika volamena ary misy fianakaviana maro manan-janaka satria milamina sy milamina ny ranomasina misaotra noho ny fisian'ny vatosokay vatosokay roa mametaka azy. Ranomasina, fasika ary etsy an-daniny misy zavamaniry betsaka mameno ny carte postaly ary manatsara ny hatsarany. Ny maha tora-pasika malaza dia voalamina ka misy fandroana, trano fidiovana ho an'ny daholobe, efitrano hanovana akanjo ary azonao atao manofa sunbeds sy elo.
Misy ny fivarotana manofa fitaovana ara-panatanjahantena rano, fitoeram-pako hamerenana ny fako etsy sy eroa ary maro hafa trano fisakafoanana, kafe, fisotroana sy fivarotana mivarotra trondro ihany. Ary mazava ho azy, be dia be ny azo atao trano hipetrahana. Tonga an-tongotra ny olona, ​​nandeha bisikileta, fiara na bus. Misy toerana fijanonana eo akaiky eo ary eo akaiky eo koa ny fiantsonan'ny bus. Ary asiana lalambe raha sendra mandeha amin'ny seza misy kodiarana na amin'ny kodiarana amin'ny zaza ianao.
Inona ny lokon'ny ranomasina! Manga manga misy tasy manga, hatsarana. Ity morontsiraka ity Efatra kilometatra miala an'i Agia Napa no misy azy, toeram-pialan-tsasatra fanta-daza any Sipra. Hitanay teny an-dalana, teo anelanelan'i Protaras sy Cape Gkreko.
Manana izany 200 metatra ny halavany ary manana hatsarana sy endrika kanto be dia be izy io. Ny fasika dia tsara sy volamena ary milamina ny rano ary mialokaloka amin'ny rivotra izy ireo ka saika safosafo ny fivontosana. Izy io dia misy trano fidiovana ho an'ny daholobe, toerana hanovana akanjo raha sendra bus ianao na tsy misy akanjo fandroana, elo sy seza tokontany no nohofana ary tsy manana ny Bara amoron-dranomasina toerana anaovana mozika sy sakafo sy zava-pisotro vaovao.
Avy amin'ity morontsiraka ity afaka mandeha any amin'ny morontsiraka mifanila aminy ianao Ary izany no mahatonga ny sambo kely ho avy sy handeha ary tsy misy ny tsy fahampiana, eny amoron-dranon'ny boribory dia misy sambo lehibe kokoa mitondra mpizahatany na mpizahatany. Avy any amoron-dranomasina dia misy trano fandraisam-bahiny izay manatrika ny ranomasina ny efitranony, ary izay mety ho lafo vidy, ary eo akaiky eo misy trano fisakafoanana sy tsena kely. Izany hoe amoron-dranomasina ahafahanao mivoaka mividy zavatra, miverina, miverina ary mandany tontolo andro.
Ho tianao ihany koa ny fidirana amin'ny morontsiraka ary hanokana sary mihoatra ny iray ho azy ianao. Izy io dia làlana rakotra hazo kesika sy zavamaniry izay vao manomboka ary manome anao fahitana tsara ny ranomasina. Ary raha te-handeha kely ianao avy any Konnos dia azonao atao ny miditra ao Valan-javaboary ala, mpikambana ao amin'ny tetikasa Natura 2000 any Eropa, toerana tsara hanaovana trekking, ary na dia, Antsitrika
Ao Konnos dia misy mpiambina mpamonjy voina sy mpamonjy voina mandritra ny volana vitsivitsy amin'ny taona: aprily, mey, septambra ary oktobra ary eo anelanelan'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. Amin'ny Jona, Jolay ary Aogositra dia eo anelanelan'ny 10 am ka hatramin'ny 6 hariva. Ahoana no ahatongavanao amin'ny moron-dranomasina Konnos? Mandeha an-tongotra, mandeha bisikileta (izany ny sosokevitro), na amin'ny fiara, fa hadinoy ny bus satria tsy misy izany.
Iray kilaometatra monja avy eo amin'ilay toerana amoron-tsiraka malaza sy be olona any Agia Napa ity morontsiraka kely tsara tarehy antsoina hoe Gliki Nero ity. Izy io dia 250 metatra lava ary mahatratra ny Agia Napa Caves sy ny faritra seranan-tsambo, fahitana iray hafa azo jerena.
Satria morontsiraka malaza koa izy io, dia voalamina ao an-tsaina ireo mpitsidika ary misy trano fidiovana ary Ampanofaina ny seunger masoandro, elo ary ny fitaovana fanatanjahan-tena amin'ny rano somary tsotra. Y misy kioska sy trano fisakafoanana mihinana manodidina ankoatran'ny zava-misy fa misy trano honenana koa ao amin'ilay faritra.
Mikasika ireo mpiambina dia amin'ny fahavaratra eo anelanelan'ny 10 am ka hatramin'ny 6 hariva ary ny aprily, mey, septambra ary oktobra dia manomboka ary mifarana adiny iray alohan'ny asa fanompoana ataon'izy ireo. Morontsiraka Blue Flag izy io ary any Ammochostos no misy azy.
Ity morontsiraka vatokely tery ity dia ao amin'ny spaoro an'i Agios Tychonas, ao amin'ny distrikan'i Lemesos. Fasika sy vato, fa vato hafa noho ny fasika. Milamina ihany koa ny ranomasina eto satria misy haran-dranomasina artifisialy manakana ny onja. Manatsara ny toerana hanaovana azy koa izany snorkeling sy antsitrika.
Ny tanàna fahiny an'ny Amathunta, tanàna seranan-tsambo, dia teo akaiky teo ny morontsiraka. Misy lalana mahafinaritra tsara tarehy izay mamakivaky izay sisa aminy. Amin'ny ambaratonga na terrasety, elo sy birao, kioska ary trano fisakafoanana no napetraka ary raha milentika ianao, mamaky sy mifampiresaka fa tsy milalao fasika, dia morontsiraka mety izany.
Andininy tsy dia manandanja loatra: Morontsiraka Blue Flag izy io.
Ity morontsiraka Siprosy tsara tarehy ity dia ao amin'ny faritr'i Lemesos, sahabo ho 30 kilometatra miala ny tanàna. Raha ny marina dia spa ho an'ny olona rehetra monina ao izy io. Mahafinaritra ny sary voajanahary ary ny morontsiraka dia fasika mahafinaritra volamena mifangaro vatokely kely. Ny rano amin'ny ankapobeny dia somary milamina sy manjelanjelatra ary manodidina azy, raha mandeha kely ianao dia hiditra ao hantsam-bato fotsy any Cabo Aspro. Inona ny sary!
Amin'ny faran'ny morontsiraka iray misy coves kely fasika ary raha mananika ny harambato ianao dia ny fomba fijery no tsara indrindra: ny faravodilanitra, ny moron-dranomasina, ny vorona an-dranomasina ary antenaina fa fano an-dranomasina tonga hiteraka.
Sipra dia toeran-kaleha amin'ny fahavaratra ka eto koa ianao manana morontsiraka voalamina izay manana trano fandroana, toerana hanovana akanjo sy elo ary seza tokon-trano hofaina. Misy làlam-panjakana dimy, ny roa amin'izy ireo dia mety amin'ny olona manana fahasembanana, ary eo koa ny kianja volley volley ary ny mety hanaovana spaoro rano. Ny trano fisakafoanana, kioska ary fivarotana dia eo akaikin'ny moron-dranomasina fa raha tsy ao amin'ny tanànan'i Pissoroui dia misy karazany maro kokoa ary ny zavatra tsara indrindra dia ny toerana nentin-drazana.
Tonga eto tokoa ny bus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Sipra » Tora-pasika mahafinaritra 5 any Sipra hankafizanao ny fahavaratra 2016
Morontsiraka nudisty 5 any Espana hanehoana ny natiora indrindra
Nosy any amin'ny farihy hahazoana fitsangatsanganana